Istiikarada Daaweynta Jirka ee Shiinaha iyo Soosaarayaasha iyo Alaabta - Baili Medical
Guriga > Alaabta > Caafimaadka iyo Daryeelka Caafimaadka > Istiikarada iyo Bacaha Daawaynta Jirka
Istiikarada Daawaynta Jirka iyo Bacaha waxay ka kooban yihiin xeryahooda polymer-ka sare iyo noocyo kala duwan oo walxo bayooloji ah, oo ay sameeyeen hay'adaha madaxa banaan ee Mareykanka oo aan ku suntan jirka bini'aadamka iyada oo aan wax saameyn ah ku yeelan. Habka sayniska ayaa bacda ka dhigaysa mid jilicsan oo waxay hayn kartaa dareen jilicsan marka lagu kaydiyo muddo dheer deegaanka laga jaray 190â„ƒ, oo loo yaqaanno “bac aan baraf lahayn”.
Istiikarada Jirka iyo Bacaha: madax-xanuun, qandho, ilig-xanuun, kulayl, madax xanuun, murqo xanuun, murgacasho, hemostasis trauma, beauty, iwm. Cadaadis kulul: laabotooyinka, laabotooyinka, dysmenorrhea, calool xanuun, spondylitis ilmo-galeenka, sciatica, muruq lumbar. iwm.
Istiikarada iyo Bacaha Daawaynta Jirka: Ku rid qaboojiyaha ama qaboojiyaha si aad u isticmaasho. Cadaadis kulul: bacda riix foornada microwave ka oo kuleyli (heerkulka sare) 2 daqiiqo, ama bacda uumi si ay si buuxda u kululaato ka hor inta aan la isticmaalin.
Waxyaalaha Dabiiciga ah ee Culayska Caloosha
Anaga naga iibso Walxaha Dabiiciga ah ee Culayska Caloosha. Waxaan ku samayn karnaa tan Patch-ga cajiibka ah oo leh qiimo tartan iyo tayo Wanaagsan oo leh saameyn wanaagsan Alaab Cusub !Iibka Kulul ! Caloosha Slimming Patch,Ballan Caloosha Fiican,Waxa laguu samayn karaa baakad laguu habayn karo iyadoo lagu salaynayo naqshadaada ilaa 24saac oo wareeg ah oo gubanaya dufanka sidoo kale marka aad seexanayso,dardargelinta habsocodyada dufanka buuran,xitaa nuugista baruurta ee jidhkaaga iyo yaraynta gaajada inta lagu jiro maalinta Qaar ka mid ah duubabka caloosha kale ee miisaan lumis ayaa sameeya. Badankiina waxaad raadin doontaan inaad gubto dufanka iyo kalooriyooyinka. Dhammaan dhibicda gooyeeyaha dhexda dhexda ayaa ah in aad xidhato suunka marka aad jimicsi samaynayso oo aad ka caawiso gubid......
Jidh-qaabeeya Tababaraha dhexda
Waxaan soo saareynaa tayada dhexda Tababaraha Trimmer Jidhka qaabeeyaha. dhexda dhuuban ee Miisaanka luminta: Waxaa lagu sameeyay dhumuc dheeri ah, Neoprene-latex-la'aan ah waayo-aragnimo dhidid ah oo la xoojiyey. Laakin ha ka werwerin dhididka dheeriga ah, tababaraha dhexda saunada ma celin doono oo kaliya nuugista qoyaanka laakiin sidoo kale xaddidaya siibashada inta lagu jiro jimicsigaaga. TABABBARKA DHEXE EE CALOOLKA BARUURKA: Tababaraha dhexda ee dumarka iyo suunka dhimista miisaanka ragga ma tooreeyo ama ma dabo sida Qaar ka mid ah duubabka caloosha kale ee miisaan lumis ayaa sameeya. Badankiina waxaad raadin doontaan inaad gubto dufanka iyo kalooriyooyinka. Dhammaan dhibicda gooyeeyaha dhexda dhexda ayaa ah in aad xidhato suunka marka aad jimicsi samaynayso oo aad ka caawiso gubida ......
Balastii xanuunka yaraynaysay: balastar xanuunka ka hortagga bararka waa nooc daawo ah, oo inta badan loo isticmaalo daawaynta caawimada xanuunka iyo xanuunka kala duwan ee ay keento bararka iyo xanuunka, periarthritis ee garabka, osteoarthritis iyo sciatica.
Xidhmada Qabow kulul ee dib loo isticmaali karo
Xirmada qabowga kulul ee dib loo isticmaali karo: Waxaa loola jeedaa khudaarta, khudaarta, cuntada, iyo alaabada kale ee fudud, waxyaabaha halaagga ah, walxaha noolaha iyo dhammaan alaabooyinka loo baahan yahay in lagu qaado kaydinta qabowga waxay door ka ciyaaraan ilaalinta qaboojiyaha, si looga hortago xumaantooda. Qaboojiyaha khudaarta darayga ah, miraha, biirka, cabitaanka iyo cuntada wakhti gaaban meela aan lahayn meel qabow
Kuleyliyaha Hawada Mat
Sariirta kuleylinta hawada: Kuleyliyaha hawada, sidoo kale loo yaqaan bustaha kuleylka hawada, wuxuu isticmaalaa kuleyliyaha hawada si uu kor ugu qaado heerkulka jirka suufka si loo gaaro ujeedada kuleylinta, taas oo ah wax soo saar la cusboonaysiiyay oo ku salaysan faa'iido darrada qalabka kale ee kuleylka korontada. Waa nooc cusub oo ah badeecad aan shucaac lahayn, badbaado leh, raaxo leh, badbaadinta tamarta, ilaalinta deegaanka. Lagu dabaqi karo dad badan oo kala duwan, gaar ahaan xaaladda jireed ee liita ee waayeelka si loo gaaro saameynta ugu fiican. Tignoolajiyada badeecadan ayaa heshay tiro ka mid ah shatiyada qaranka, waana badeecad cusub oo lagu kalsoonaan karo in la isticmaalo.
Xidhmada Barafka dib loo isticmaali karo
Xirmada Barafka ee dib loo isticmaali karo: Waxa ay tilmaamaysaa khudaarta, khudaarta, cuntada, iyo alaabada kale ee fudud, waxyaabaha halaagga ah, walxaha noolaha iyo dhammaan alaabooyinka loo baahan yahay in lagu qaado kaydinta qaboojiyaha waxa ay door ka ciyaaraan ilaalinta qaboojiyaha, si looga hortago xumaantooda. Qaboojiyaha khudaarta darayga ah, miraha, biirka, cabitaanka iyo cuntada wakhti gaaban meela aan lahayn meel qabow
Waxaan haynaa kuwa ugu cusub Istiikarada iyo Bacaha Daawaynta Jirka oo laga sameeyay warshadeena Shiinaha oo ah badeecadeena ugu weyn, oo noqon karta jumlo. Baili waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah Istiikarada iyo Bacaha Daawaynta Jirka soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha caanka ah ee Shiinaha. Waxaa lagugu soo dhawaynayaa inaad iibsato Istiikarada iyo Bacaha Daawaynta Jirka la habeeyey oo wata liiskayaga qiimaha iyo xigashada. Badeecadahayagu waa shahaado CE waxayna ku jiraan kaydka macaamiisheena si ay wax uga doortaan. Waxaan si dhab ah u rajaynaynaa wada shaqayntiina.